Liv Tyler kwuru na ọ dịtụbeghị mgbe o nwere nsogbu
Kpakpando Pịa banyere kpakpando
Liv Tyler mara mma nke Hollywood na nyocha ya na magazin a bụ Marie Claire kwetara na ọ na-agba mbọ ka ọ ghara itinye aka na mkparịta ụka banyere iyi egwu mmekọahụ na Hollywood ma na-eduzi ike niile maka ọrụ ọhụrụ na nkwurịta okwu na ndị mmadụ nwere obi ụtọ.
Ozugbo nwa akwụkwọ na-eto eto pụtara na ihuenyo ahụ, ọ bịara doo anya - nwa agbọghọ a na-echere ịga nke ọma. Ma ọ dịbeghị onye ọ bụla gosipụtara eziokwu ahụ bụ na ọ bụ nwa Stephen Tyler, onye egwu egwu na onye ndú nke Aerosmith. Onye omeebe si na nke mbụ na-agwa ndị na-ege ntị na ọ bụghị naanị na ọ mara mma, kamakwa ya na talent, na ọtụtụ afọ nke ọrụ siri ike na ọrụ dịgasị iche. Akwụkwọ na-enwe mmetụta nke ọma n'ịrụ ọrụ nwa agbọghọ dị elu ma mepee ụzọ ọhụrụ na sirima ihe nkiri. Ọrụ ya kwesịrị inweta nkwado nke ndị na-akatọ ihe nkiri, ọtụtụ onyinye na mmata nke ndị na-ege ntị. Na cinema, onye omeegwu ahụ dị afọ iri abụọ. N'oge a, ọ na-eto n'ụdị dịgasị iche iche, na ihe karịrị 30 eserese na taa na-ekwusi ike na ihe niile na-amalite!
Liv Tyler abụghị naanị onye na-eme ihe nkiri nke na-arụ ọrụ dị ukwuu ma na-arụ ọrụ, ma nne nke ụmụ atọ, na onye mmebe nke uwe ime ụmụ nwanyị. Banyere otú o si ejikwa ijikọta ọrụ, ụlọ na imepụta ihe, Liv kwuru na nyocha ya.
"A machibidoro omume ọjọọ"
Otu n'ime ọrụ ikpeazụ nke onye omempụ bụ ọrụ "Gunpowder." Onye ha na ya na-eme egwuregwu ahụ bụ onye nkiri a ma ama bụ Keith Harington, bụ onye natara ọkwá kachasị mma mgbe e wepụtara usoro isiokwu dị iche iche "Egwuregwu nke ocheeze":
"Tupu anyị agbapụ anyị amaghị. Ruo oge ahụ, ọ fọrọ nke nta ka m nụ ihe ọ bụla banyere ya, n'ihi na anaghị m ele usoro ntụrụndụ a dị egwu. Eziokwu ahụ bụ na e nwere otutu ihe ngosi nke ime ihe ike, na mụ onwe m, dịka ị maara, na-etinye oge niile m na-arụ ọrụ na ezinụlọ m na ụmụaka. Ma achọrọ m ịsị na Keith masịrị m na arụmọrụ yana ọkachamara. Anyị nwere ezigbo oge. Mgbe anyị na-agbaji n'etiti ọnọdụ, anyị chịrị ọchị, ọ bụ onye obi ụtọ. "
Ụdị a na-atụghị anya ya
Heroines Tyler - onye dị nro na ọdịdị aghụghọ, ma, n'ezie, ndị agbụrụ ahụ juru ya anya ịmata na ọ na-agbapụ na ihe nkiri egwu. Onye na-eme ihe nkiri n'onwe ya na-ekwu na n'enweghị nsogbu ọ na-ebi ma onye ọrụ ahụ ma onye ọrụ siri ike na nke nweere onwe ya ọrụ:
"Adị m nkịtị na fim niile, na ihe nkiri fim karịsịa. Maka m nke a abụghị ụdị mbụ nke ụdị a. Afọ iri gara aga, "onye mba ọzọ" pụtara n'elu ákwà. Ee, ọ bụ onye na-agba egwu ma n'ebe ahụ ka m na-ata ahụhụ, mana ọ ka dị nnọọ nso na ụdị egwu ahụ dị. Na Saga nke Monsters, m na-achọsi ọrụ ike ma na-achọsi ike na eziokwu, Helen. Ọ bụ onye nlekọta na ezigbo ọkà n'akparamàgwà mmadụ, yana nne na-ahụ n'anya nke nwa agbọghọ dị afọ iri na ụma. Ọ na-elekọta isi ihe ma nyere ya aka. Enwere m obi iru ala n'ihi na enwere m oke isiokwu a, n'ihi na mụ onwe m kwa bụ nne. N'ihi ya, otu ihe nkiri dị ebube ma jiri nlezianya chee echiche banyere ihe ndị dị na ya na usoro ọhụụ nke na-ewuli elu. Enwere m olileanya na ihe nkiri ahụ ga-amasị ndị na-ekiri ha, karịsịa ndị na-egwu nke thrillers nwere akụrụngwa uche. "
Atụmatụ maka ọdịnihu
Fans nke kpakpando ahụ na-ele anya na mmepe na usoro "Left Behind", nke e wepụrụ Tyler ruo ihe karịrị afọ atọ. Onye omekorita ahụ na-eche echiche ya banyere iketa ihe nkiri na ihe nkiri zuru oke ma kọọrọ ya atụmatụ ya n'ọdịnihu:
"N'ezie, m na-akwadokwa ma ọ bụ ihe nkiri na ihe nkiri. N'oge na-adịbeghị anya, m na-emekarị ndokwa na usoro, ma nke a apụtaghị na n'oge na-adịghị anya, agaghị m apụta na teepu zuru oke. Nne, dịka a maara, na-ewe oge na mgbalị, ma amalitere m ịnakwere akwụkwọ ịkpọ òkù obere oge. Achọrọ m itinyekwu oge nye ụmụ m, ezinụlọ dị mkpa mgbe niile. Ugbu a ruo ogologo oge, achọpụtara m na inwe ọrụ na-aga nke ọma, iji wuo ndị na-eme ihe nkiri ezigbo ụlọ. Enwere m obi ụtọ na nke a - mgbe m nọrọ ogologo oge n'ihi esemokwu, di m na-eburu ibu ọrụ nile nke ụlọ ma na-elekọta ụmụaka maka onwe ya. Site n'enyemaka ya, enwere m ike ịkwado nnukwu ihe nkiri ahụ. N'ozuzu, m na-echekarị banyere ọdịnihu. Achọ m ịnụ ụtọ ugbu a, ihe m na-ebi ebe a na ugbu a. N'oge na-adịbeghị anya m kwagara England ma gbanwere ndụ m. Nke a bụ ihe nkịtị, ihe niile gbanwere. Afọ ole na ole gara aga, agaraghị m eche na m ga-ezute ụdị mmadụ dị otú ahụ n'oge na-adịghị anya ma bụrụ nwunye na nne nwere obi ụtọ. Ya mere, ndụ jupụtara na ihe ijuanya na, ma eleghị anya, ọ ga-eme ka m nwee di na nwunye na-atụ aro, otu esi mara? ".
Ihe niile maka nkasi obi nwanyi
Ịmụta banyere ọrụ okike ọhụrụ nke onye na-eme ihe nkiri, ọ dịghị onye nwere obi abụọ na ihe ọ bụla o kere ga-abụ ihe mara mma ma nwee ịhụnanya. N'ikpeazụ, a tọhapụrụ nchịkọta ihe eji akwa Essen maka ejiji mmeri ahụ:
"Na nchịkọta niile nke ika a, nwanyị ọ bụla nwere ike ịchọta ihe kwesịrị ya. Maka nke a ka m hụrụ mmeri. Mgba akwa akwa gụnyere ụdị maka ndụ kwa ụbọchị nakwa maka ọnọdụ pụrụ iche. Ma anyị nwere ike iyi uwe dị mma ma mara mma ọ bụghị naanị n'ụbọchị ezumike? M, dịka ọmụmaatụ, ma mee ya. Na ọnọdụ m ahọrọ na egwuregwu, mgbe ahụ lacy, mgbe ahụ kpochapụwo. Site n'ụzọ, ugbu a, m na-egwu heroine, onye bi na 1764. Ọ na-eyi corset na, enwere m ike ịsị na ọ na-adịghị mma. Ma mgbe ahụ, ndị inyom na-eyi ha kwa ụbọchị! Maka na nchịkọta m, a na-eche ihe niile ka onye ọ bụla n'ime anyị wee nwee ahụ iru ala. Enwere kwa uwe uhie nke na-acha uhie uhie ma na-edozi bodys nke ga-anagide nani ichoputa onyinyo na obi iru gi. "
Nwanyị a na-ahụ n'anya kpughere ihe nzuzo nke nna nna nnabata na-ekwurịta okwu ya na ụmụ ụmụ ya mara mma:
"N'oge na-adịbeghị anya, Steven na-eme ememe ncheta ụbọchị 70 ya, ma ọ dị mwute, anyị anaghị ahụrịta ibe anyị, n'ihi ya, anyị kpebiri ịkele ya na kaadị vidiyo na foto ụmụ ya na foto nke ezinụlọ anyị. Oge nhazi anaghị ekwe ka anyị na-ezute mgbe niile, ma echere m na nke a adịghị njọ, n'ihi na ọ na-akpali ezigbo mmekọrịta ezinụlọ. Papa m na-enwe mmasị iji oge ya na ụmụ ụmụ ya ọ hụrụ n'anya na-enwe oge ozugbo. Ọ na-eche echiche mgbe niile ma na-akọ akụkọ dịgasị iche iche, na nke a ụmụaka na-akpọ ya ọkachamara ụdị. N'oge na-adịbeghị anya, ya onwe ya mere nwa m nwoke ọkpara nnukwu ụlọ egwuregwu. Ọ dị jụụ. "
Gwyneth Paltrow na nzuzo zụrụ Brad Felchak
Livpara Tyler na Dave Gardner hụrụ paparazzi na njem na ụmụ na New York City
Anyị fọrọ nke nta ka ha funahụ ha: mmadụ 17 nwere ike ịnwụ mgbe ha na-ese foto
"Egwuregwu mebiri m"
Banyere ihe mere n'oge na-adịbeghị anya na-agba agba na mmekọahụ Hollywood na nsogbu ndị nwoke, onye na-eme ihe nkiri ahụ achọghị ka ọ sị:
"Anụwo m banyere nsogbu ahụ, mana mụ onwe m anaghị etinye aka na mkparịta ụka ndị a. N'ụzọ dị mma, ụdị nsogbu a adịghị emetụ m, ma achọghị m itinye aka na usoro ndị a. Ma ọtụtụ ndị ọrụ ibe m kwurịtara banyere nke a. "
Jessica Biel kwuru banyere ịhụnanya Adam Sandler na "ezigbo ọkụ" na Justin Timberlake
Sharon Stone kpughere ihe mere ya ji anọghị ya
Ricky Martin gwara ya ihe mere o ji zoo nghazi ya ruo ogologo oge na banyere di ya na di ya
Megan Markle kwuru banyere ụmụ nwanyị iri ndị na-akpali ya
Brigitte Macron kwuru banyere ndụ siri ike nke nwanyị mbụ nke France
Nicole Scherzinger gbara ajụjụ ọnụ na magazin bụ Cosmopolitan
Eva Longoria kwupụtara na ọ na-agụsi agụụ ike maka ihe ndị e ji akwa uwe ya
Katie Holmes dị njikere igosipụta nkọwa nke ndụ ya
Keira Knightley gbara ajụjụ ọnụ dị iche iche na magazin dị iche iche, na-akọwa ọrụ ya na Harvey Weinstein, mmasị na fim na egwu
Ma ha dị n'otu: foto ọhụrụ nke Kate Hudson na Nick Jonas kụrụ mgbasa ozi
Kunis na Kutcher na njem ezinụlọ
Foto nke ụbọchị: Angelina Jolie mara mma na ụmụaka na ọdụ ụgbọ elu
Anne Hathaway n'atụ anya nwa ahụ?
Robert Pattinson chetara oge gara aga
Obere akpụkpọ ụkwụ - 40 foto nke ihe oyiyi dị mma kwa ụbọchị
N'oge okpomọkụ collection nke etemeete ZHivanshi 2014
Mmiri na-eme ka mmiri ghara ịṅụ mmanya
Gịnị kpatara nrọ nke ịṅụ biya?
Ndị ọkà okwu na-arụ ọrụ na mmepụta igwe
Kedu esi eji aka gị mee ọkụkọ na akwụkwọ?
Omume ndị na-edozi onwe ha na ndị inyom na ụmụ nwanyị
Kedu ka esi etinye akara mgbu?
Acacia mmanụ aṅụ - bara uru Njirimara na contraindications
Esi esi nri pancakes?
Akpanaka maka mbọ - esi eji eriri maka ịkpụcha mbọ aka?
Shurpa si mutton
Hen na oven microwave
Rhinitis na nwa ọhụrụ
Pompons na anya, ntutu na mbọ na 34 ọzọ na-awụ akpata oyi mma-na-emekarị Instagram!
Gini mere otu ara ji buru ibu karia nke ozo?